စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်းကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
« # ဒေါသထွက်နေသော ဌက်များ / Angry Birds
# ကုသိုလ် အကုသိုလ် ? »
# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်းPublished June 13, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများ ကြားဘူးကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ စကားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အဆုံးအမလေး တစ်ခုပါ။
နံပါတ် (၁)စကားက “မဟုတ်၊ အကျိုးမရှိ ၊ မကြိုက်” တဲ့ စကား။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတော့ လူတစ်ယောက်(သို့) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံအပုပ်ချတဲ့ စကား၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့ စကားမျိုးပေါ့။ ယနေ့ အင်တာနက် လူမှုရေးဝက်ဆိုဒ်တွေ ၊ သတင်းဆိုဒ်တွေရဲ့ ကွန်းမန့်တွေ မှာ အများဆုံးတွေ့နေရတဲ့ စကားပါ။ တကယ် တရားတော်နဲ့ ပြောရရင် အင်မတန် အပြစ်ကြီးတဲ့ စကားတွေပါ။ ဘုရား မကြိုက်ဆုံးစကား ၊ အပယ်ငရဲကို လားမယ့် စကားတွေပါ။ လုံးဝရှောင်သင့်ပါတယ်။
နံပါတ် (၂) စကားက “မဟုတ်၊ အကျိုးမရှိ ၊ ကြိုက်” တဲ့ စကား။ မဟုတ်တာတွေ လုပ်နေတဲ့လူကို မဟုတ်တာလုပ်မှန်း သိပါရက်နဲ့ သူ့ဆီက အကျိုးရလိုမှုကြောင့် မြှောက်ပင့် ၊ ဖော်လံဖားပြီး ပြောတဲ့စကားမျိုးပါ။ ဘယ်လိုမှမကောင်းပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ကိုယ်ပြန်မလေးစားနိုင်တော့တဲ့ စကားပါ။ အွန်လိုင်းတွေ ပေါ်မှာ လူကြိုက်များစေမယ့် မုသာဝါဒ စကားလုံးတွေ ၊ လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ ရုပ်ပုံတွေ ဖော်ပြပြီး ကိုယ့်နာမည် ကျော်ကြားမှု ကို လုပ်နေသူတွေလည်း ပါပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ စကားပါနော်။
နံပါတ် (၃) စကားက “ဟုတ်တယ်၊ အကျိုးမရှိ ၊ မကြိုက်” တဲ့ စကား။ ဥပမာ – အရမ်းပိန်တဲ့သူတစ်ယောက် “သိပ် ပိန်တာဘဲနော်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလား” လို့ ပြောရင်အပြောခံရသူက မကြိုက်ပါဘူး။ ဒီအတိုင်း အရမ်းဝ တဲ့သူတစ်ယောက်ကိုလည်း “သိပ်ဝတာဘဲနော်” ပြောကြည့် ၊ မကြိုက်ပါ။ မမှန်ဘူးလားဆိုတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပြောလိုက်လို့ ချက်ခြင်း ပိန်ရာက ၀မလာသလို၊ ၀ရာကလည်း ပိန်မသွားပါဘူး။ အကျိုးမရှိဘူးပေါ့။ ဒီစကားမျိုးကတော့ အလိုက်မသိတတ်သူ ၊ ပါးနပ်လိမ္မာမှု မရှိသူတွေ ပြောလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အပြစ်တော့ သိပ်မကြီးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကျိုးမရှိလို့ ဘုရားမကြိုက်ပါဘူး။
နံပါတ် (၄) စကားက – “ဟုတ်တယ်၊ အကျိုးမရှိ ၊ ကြိုက်တယ်” ဆိုတဲ့ စကား။ ဒီစကားက နည်းနည်း ရှင်းပြဖို့ ခက်ပါတယ်။ လူ့လောကထဲက ချီးမွမ်းစကားတွေပါဘဲ။ အမြှောက်အပင့်တွေလည်း ပါနိုင်ပါတယ်။ လှပ ချောမောတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သိပ်ချောတာဘဲ လို့ ပြောရင် ကြိုက်ပါတယ်။ မှန်နေတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ဒီစကားကြောင့် အလှမာန ပိုတက်လာနိုင်ပြီး “အိုခြင်း ၊ နာခြင်း ၊ သေခြင်း” ဆိုတဲ့ အမှန်တရားတွေနဲ့ အလှမ်းကွာသွားနိုင်လို့ ဘုရား၊ ရဟန္တာတို့က မကြိုက်ပါဘူး။ လူ့လောကထဲမှာ အပြစ်သိပ် မရှိပေမယ့် နိဗ္ဗာန်နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ စကားတွေဖြစ်လို့ ဘုရား ၊ ရဟန္တာတွေ ပယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နံပါတ် (၅) စကားက – “ဟုတ်တယ် ၊ အကျိုးရှိတယ် ၊ ကြိုက်တယ်” ဆိုတဲ့ စကား။ ဒါကတော့ အကောင်းတကာ့ အကောင်း ဆုံး စကားမို့ ရှင်းပြဖို့ လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ လောကီရော ၊ လောကုတ္တရာမှာပါ အကျိုးများတဲ့ စကားမျိုးပါ။ ဗုဒ္ဓဟာ သူ ပွင့်တော်မူစဉ် ကာလတစ်လျှောက်လုံး အများဆုံးပြောသွားတဲ့ စကားပါ။ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်တွေ မှန်သမျှ ဒီစကားတွေပါဘဲ။ ဒီလို စကားမျိုးကိုသာ ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံး အေးချမ်းသာယာနေ ပါလိမ့်မယ်။
နံပါတ် (၆) စကားက - “ဟုတ်တယ် ၊ အကျိုးရှိတယ် ၊ မကြိုက်” ဆိုတဲ့ စကား။ ဒါကတော့ ဥပမာ ပေးရလွယ်ပါတယ်။ မိဘ ဆရာသမားတွေက သားသမီးတွေ ၊ တပည့်တွေကို မကောင်းတာ မလုပ်ကြဖို့ တားမြစ်တဲ့ စကားမျိုး။ လူငယ်တွေရဲ့ လွတ်လပ်ချင်တဲ့ သဘာဝကြောင့် မကြိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အကျိုးရှိတဲ့ စကားတွေဖြစ်တယ်။ ဒီလို စကားမျိုးကတော့ ကိုယ့်ကို မုန်းမယ်ဆိုလည်း ပြောရမှာဘဲ။ ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင် ဆိုဆုံးမလို့ မလွယ်တဲ့ ရဟန်းတစ်ချို့ကို ဒီလို စကားမျိုးနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချ ပြောတာတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ အကျွတ်တရားရစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ပါ။
(ယခု ကျွန်တော် ရေးလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးကလည်း နံပါတ် (၆)ထဲမှာ ပါပါတယ်။ တချို့လူတွေကတော့ လုံးဝ ကြိုက်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အကျိုးရှိတဲ့ စကားမို့ ပြောရမှာဘဲ) ဒါကတော့ ဒီခေတ်မှာ စာဖတ်နည်းသွားတဲ့ လူငယ်တွေ အတွက် ဗဟုသုတလေး တစ်ခုပါ။ လူလတ် ၊ လူကြီး ပိုင်း အတော်များများ ကြားဘူး သိဘူး သူများပါတယ်။ အခုလို အင်တာနက်ခေတ် ၊ သတင်းခေတ်မှာ လူငယ်တွေ ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ပြောနေကြတာတွေ ၊ သတင်းဝက်ဆိုဒ်တွေရဲ့ ကွန်းမန့်ထဲမှာ ပြောနေကြတာတွေ ဟာ ရှောင်ရမယ့် စကား (၄)ခွန်းသာ အများဆုံး ဖြစ်နေပြီး ဆောင်ရမယ့် စကား (၂)ခွန်းကတော့ သိပ်ကို နည်းနေတာကို သတိပြုမိလို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးမိလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ပြဿနာတစ်ခုက တစ်ချို့ လူငယ်တွေမှာ အသက်ငယ်သေးခြင်း ၊ ဘ၀အတွေ့အကြုံ နည်းလွန်းခြင်း ၊ လူငယ်ပီပီ စိတ်ဆတ် သွေးဆူလွယ်ခြင်းတို့ကြောင့် “ဟုတ်ပင် ဟုတ်ငြားသော်လည်း” အကျိုးသက်ရောက်မှု အတိုင်းအတာကို ချိန်ဆနိုင်ခြင်း မရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ကြားသမျှ မြင်သမျှအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုကို မချိန်ဆတော့ဘဲ စိတ်အားထက်သန်စွာ ပြောဆိုဝေဖန်မှု ၊ မိမိတို့ ခံစားချက်များကို တစ်ဦး နှင့် တစ်ဦး အလွယ်တကူ ဖြန့်ဝေမှုများ ကြောင့် တိုင်းပြည်တွင်းမှာ မဖြစ်သင့်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့နေရကြောင်းပါခင်ဗျား။
Posted in ဓမ္မစကား	Comments are closed.
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,640)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,357)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,198)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,018)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,047)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,358)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,184)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,699)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,736)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,395)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,353)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,191)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,152)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,132)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,455)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,401)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (9,036)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,904)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,746)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,744)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,290)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,892)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,774)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,740)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,607)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,555)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,349)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,152)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,100)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,043)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !